Agwaetiti kacha mma Greek Greek kachasị mma | Akụkọ Njem
Otu n'ime ebe kachasị mma n'oge okpomọkụ n'ụwa niile bụ agwaetiti Greek. Lee njem! Enweghị ebe mara mma karị nke na-achọ Mediterranean. O doro anya na e nwere ihe ndị ọzọ mara mma, mana ụdị ọdịdị dị iche iche na ọhụụ nke anyị nwere ike ibi agwaetiti kacha mma enweghị nhata.
Ọzọkwa, e nwere ezigbo agwaetiti Greek ime njem dị ka di na nwunye, agwaetiti ndị ọzọ ịga dịka ezinụlọ na ndị ọzọ ịga njem naanị ha ma zute ndi mmadu. Kedu otu ndị njem ị nọ?
1 The kacha mma Greek isuo ka njem dị ka di na nwunye
2 Agwaetiti Greek kacha mma isoro ezinụlọ
3 Agwaetiti Greek kachasị mma maka njem naanị
The kacha mma Greek isuo ka njem dị ka di na nwunye
Agwaetiti Gris maara otu esi agwakọta osimiri mara mma na gastronomy na-atọ ụtọ, yabụ ha bụ atụmatụ kachasị mma maka ndị di na nwunye, ma ha na-aga njem ezumike ma ọ bụ naanị ezumike. N'ime edemede taa, anyị ga-ahụ na e nwere agwaetiti ndị nwere ike ịdị mma maka ndị di na nwunye kamakwa maka ezinụlọ ma ọ bụ ndị njem njem, na nke ahụ, echere m, bụ ihe kachasị mma maka njem njem a. Ọdịmma ya na ọgaranya ya.
La agwaetiti corfu, nke nwere ọmarịcha mmetụta Venetian, ọ bụ ezigbo ịhụnanya. Di na nwunye ahụ nwere ike ịgbazite skuuta ma jee ije, nwee ntụrụndụ, lelee anya n'oké osimiri ka ifufe na-efe ha ihu. Obodo Corfu jupụtara na obere ụlọ obibi na họtel dị iche iche. Ma na mgbakwunye, Corfu nwere osimiri mara mma, nke jupụtara n'akụkọ ihe mere eme na ọdịdị. Karịsịa D'Amour osimiri.
Agwaetiti nke Santorini ọ bụ kpochapụwo, akwụkwọ ozi nke dum Greek agwaetiti. Ọ bụ ebe kacha mma grik kacha mma maka ndị ezumike n'ihi na enwere ọtụtụ ụlọ ụka mara mma ma a na-atụgharị ọdịda anyanwụ kachasị mma. Ọzọkwa, ebe a bụ ụfọdụ n'ime ụlọ nkwari akụ kachasị mma na mba ahụ, dị ka Hotel Katikies, na Oia. Maka echiche ndi ozo nke anwu ala, enwere Astra Suites.
Mykonos Ọ bụ akara aka nke ndị mmekọ nwoke na nwoke par kacha mma na ọ bụ n'ihi na agwaetiti ahụ nwere ogologo akụkọ ihe mere eme maka otu a. Nwere ike ịga dị ka di na nwunye ma ọ bụ na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye ... wee laghachi dị ka di na nwunye. Onye ma? E nwere ọtụtụ ezigbo ụlọ oriri na ọ hotelsụ andụ na ụlọ nkwari akụ, ụlọ mmanya na ụlọ mmanya na ebe niile na ọtụtụ nnọkọ oriri na ọyingụ .ụ. Na abalị mykonos ọ dị ịtụnanya.
Onyekachukwu Ọ bụ ọzọ dị mma ebe njem dị ka di na nwunye. Mmiri ya doro anya, osimiri ya nwere aja ma ọ bụghị obere okwute, obodo ya mara mma ma nwee ọtụtụ ndị na-eto eto. Ma n'ezie, ama ụgbọ mmiri kpuru ekpu Ọ bụ ya kacha mma nleta niile.
Àgwàetiti ọzọ nke di na nwunye bụ Nkwụsị, n’agbata Santorini na Mykonos. O kariri ndi agbata obi ya mana ọ dị jụụa na usoro nke ndị ọbịa. Mgbe ahụ, ọ dị ọnụ ala. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ na-eme kitesurfing na windurfing, mana ọ bụ maka ịma oke osimiri ya, ebe ngosi ihe mgbe ochie ya, ụka ya. Naxos Ọ bụ ebe ọzọ mara mma, agwaetiti kacha ukwuu nke ndị otu Cyclades.
A na-ejikarị Naxos tụnyere Paros, mana ndị nke ikpeazụ na-enye nhọrọ ka mma ịkwaga ya mere a na-ahọrọkarị ya. Nke ahụ bụ, Naxos nwere njikọ bọs na ụgbọ mmiri na ndụ abalị, ma ọ na-da jụụ. Maka ọrụ ndị ọzọ na ndụ obodo enwere agwaetiti Rhodes, agwaetiti nwere ọtụtụ akụkọ ihe mere eme na njem nleta.
N'ikpeazụ, Crete kwesịrị ịdị na ndepụta a n'ihi na ọ bụ ebe dị ọnụ ala karịa ndị ọzọ, ma na gastronomy ma na ebe obibi. Ọ bụ nnukwu agwaetiti ya mere enwere ọtụtụ nhọrọ ụlọ nkwari akụ, dị oke ọnụ ma ọ bụ dị ọnụ ala karịa, enwere ọtụtụ osimiri na a ezigbo usoro njem.
Agwaetiti Greek kacha mma isoro ezinụlọ
Gris nwere ọtụtụ agwaetiti, 227? Ya mere o siri ike ịhọrọ. Cyclades, ndi Dodecanese, ndi Ionia ...? Mgbe gị na ụmụaka na-eme njem, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịhazi, yabụ anyị nwere olile anya inye gị ezigbo ndepụta nke agwaetiti Greek ka ị soro ụmụaka.
Corfu ọ ka bụ nhọrọ. Bụ a ezigbo agwaetiti, nwee ugwu mara mma na obere ime obodo nwere oke osimiri gburugburu ya. Ugwu na-enye mmiri di jụụ ka ha jiri ụbọchị ahụ. Ebe etiti akụkọ ihe mere eme nke Corfu, Ihe Nketa Uwa, ọ dị mma ịgagharị ma na-enwe mmasị na ụkpụrụ ụlọ nke Venet, ka ụmụaka nụrụ ụtọ ụfọdụ nri mpaghara ...
Ee ee, enwere oge ịrarụ ụra n'ihi na ebe a, dịka n'ọtụtụ n'ime agwaetiti Greek, n'agbata 3 na 5 n'ehihie oge na-akwụsị. Nwere ike ịgbakwunye otu ịnyịnya ibu, njem mmụta na mbibi nke Templelọ Nsọ Atemis, a ụgbọ mmiri na-agba ịnyịnya na a uzo ala, na Ogige Hydropolis in Acharavi ...
Enwere ike ileta Krit dị ka ezinụlọ. Mkpọmkpọ ebe, ọgba n'oké osimiri, ụsọ mmiri na-acha, ọ bụ echiche efu n'anya ụmụaka. Nke a Knossos, ebe dị mma iji mee ụmụaka ka ha laghachi na oge, yana n'obodo Heraklion enwere ọtụtụ ụlọ ebe ana- edobe ihe akụkọ emere ka ụmụaka soro gaa ya. Dịka ọmụmaatụ, Ebe ngosi ihe mgbe ochie na Retlọ CretAquarium. E nwekwara Ogige Dinosauria.
Na mgbakwunye, na ụmụaka Krit nwere ike nwee obi ụtọ n'akụkụ ọdọ mmiri nke Elafonisi wee kpọọ ọdọ mmiri ọdọ mmiri nke Kato Gouves, snorkeling, kayaking, ịgagharị Ọdụ Dikteon ma ọ bụ ịga ije site na ebube Osimiri Sameria, osimiri kachasị ukwuu na Europe niile.
RhodesYa na nnukwu ụlọ ya, ọ dịkwa mma. Enwere ọtụtụ ụsọ mmiri ezinụlọ, dịka Faliraki Beach, nwere ogige mmiri. Mana ihe kachasị mma ọ na-enye bụ na oge ọkọchị dị ogologo karịa n'agwaetiti ndị ọzọ, yabụ ị nwere ike ịga mpụga nke nnukwu oge. Enwere ezigbo akwarium, ndị Marline akwarium, na ọdụ ụgbọ mmiri, mara na iju mmiri n'okpuru osimiri ndụ, e nwere Ndagwurugwu nke Butterflies ma ọ bụrụ na ọ bụghị na e nwere mgbe ugwu na oké ọhịa na-eje ije.
Santorini na-enye ugwu mgbawa ya n'oge gara aga na nke ugbu a. Nwa obula nwere ike tụgharịa na echiche nke na-eje ije site a ugwu mgbawa ... ma n'ofè na e nwere ndị mara mma obodo nta na nrọ osimiri. A na-ahụ ikuku mara amara na Kamari ma ọ bụ Perissa. Ma ọ bụrụ na ụmụ gị dị ka akụkọ ntolite, enwere mkpọmkpọ ebe nke usoro Akrotiri.
Maka ezumike dị jụụ, nke udo na nke mara mma enwere ebe ndị ọzọ a tụrụ aro dịka Milos, nwere ọgba ya zoro ezo na usoro okwute mara mma. Lefkada, Paros, Kos ma ọ bụ ụgbọ nke Zaknthos nwekwara ike ịbụ na ndepụta a.
Agwaetiti Greek kachasị mma maka njem naanị
Agwaetiti ọ bụla bụ ebe dị mma maka njem solo, mana ịnwere ike tụlee ụlọ dị ọnụ ala karịa, ụlọ obibi ma ọ bụ ụlọ nkwari akụ, ụgbọ elu dị mfe, njikọ ụgbọ mmiri, Ogwe enyi na enyi, ndụ abalị, ezigbo njem ọha ...
Yabụ, na-atụle ndepụta a, m ga-asị na agwaetiti kachasị mma ịga naanị ya bụ Krit, Ios, Mykonos, Santorini, Naxos, Rhodes ... Kreti Ọ bụ agwaetiti Gris kasị ukwuu ma nwee ọtụtụ ihe maka ndị njem njem. E kewara ya na mpaghara anọ na nke ọ bụla nwere obodo ya, ụlọ nkwari akụ ya na ndụ abalị ya na-atọ ụtọ. Na Rethymno enwere ụlọ mbikọ nke ndị ntorobịa, na Heraklion the Intra Muros na Chania nke Cocoon City, nnukwu ulo iji zute ndi mmadu.
Jos ọ bụ ihe ọzọ na ezigbo àgwàetiti na-eto eto njem, ndị na-eme njem azụ azụ. Ọ bụ ebe na-ewu ewu maka ndị Australia na North America na-eme njem na Europe. Ọ dị ọnụ ala karịa onye agbata obi ya, Mykonos. Na-esote na ndepụta ahụ Santorini, n’Agwaetiti Ionian. Nwere ezigbo mma ọnụ ala ụlọ, dị ka ụlọ oriri na ọlandụ ,ụ Caveland, ma ọ bụ Villa Kasteli ma ọ bụ Hostlọ oriri na ọ Youthụ Youthụ ndị ntorobịa Anna, na Perisssa. Ọzọkwa, ọ bụ agwaetiti mfe iji bọs na-agagharị.
O doro anya na anyị enweghị ike ichefu banyere Mykonos, agwaetiti kachasị mma nke niile. Ndi otu, ndi di iche iche na agba, osimiri di ebube ... Naxos ọ bụ agwaetiti ọzọ dị mma maka njem naanị, ọtụtụ ezumike karịa, na mmanya, ebe obibi na ndị na-azu azu. Roomslọ ndị dị ọnụ ala dị na mpụga obodo ochie, na Agios Georgios, dịka ọmụmaatụ. Agwaetiti Ọ nwere njikọ chiri anya ma ị nwere ike ịga ụgbọ mmiri ebe niile.
Rhodes na ihe nketa nke Crusader ọ bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ mara mma. Nke a na nso nso ụsọ mmiri turkish yabụ ị nwere ike ịgafe oke mmiri ma ọ bụrụ na njedebe nke njem gị. N'ezie, anyị nwere ike ịga n'ihu na-agbakwunye agwaetiti ma ọ bụ na-ekwughachi ụfọdụ n'ime ndị na-apụta na ngalaba ndị gara aga. Ọ bụkwa gị mere njem ahụ. Agwaetiti Grik niile mara mma. Enwere ọtụtụ, nke ahụ bụ nsogbu ahụ, yabụ ndụmọdụ anyị bụ ka anyị lekwasị anya ma chee echiche nke ọma gbasara ụdị ezumike ịchọrọ.
Osimiri, nri na ezumike? Mmegharị, njem, isoro ụmụaka? Akụkọ ihe mere eme, egwuregwu, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie? Abalị, oriri, ịhụnanya, mmekọahụ? Echegbula, enwere agwaetiti, ma ọ bụ ọtụtụ, maka gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Agwaetiti kacha mma Greek